Malaayiin Lacag Ah Oo Qoyskii Osama bin Laden Lahaa Oo Lagu Maal Galiyay Koox Hadda Premier League Ka Tirsan Iyo Maxkamada London Oo Kiiskan Qaadaysa. - Gool24.Net
Malaayiin Lacag Ah Oo Qoyskii Osama bin Laden Lahaa Oo Lagu Maal Galiyay Koox Hadda Premier League Ka Tirsan Iyo Maxkamada London Oo Kiiskan Qaadaysa.
May 17, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda horyaalka Premier league u soo dalacday ee Sheffield United ayaa dhexda kaga jirta kiis la xidhiidha in lagu maal galiyay lacag laga soo amaahday hogaamiyihii Al Qacida ee Osama bin Laden.
Muran ka soo dhex baxay mulkiilayaasha kooxda Premier league ku soo biirtay ee Sheffield United ayaa keenay in ay maxkamad isla galaan waxayna taasi banaanka soo dhigtay in qoyskii Osama bin Laden laga soo amaahday 3 milyan gini.
Maxkamada sare ee London ayaa hadda qiimaynaysa dagaalka u dhexeeyay mulkiilayaasha kooxda Sheffield United oo kala ah Kevin McCabe iyo Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud.
Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud oo ka mid ah qoyska Saudi Araba ayaa saami ku leh kooxda Sheffield United wuxuuna khilaaf soo kala dhex galay ninka ay kooxda wada leeyihiin ee Kevin McCabe.
Dhegaysa maxkamada muranka mulkiilayaasha Sheffield United ayaa galay maalintii afraad laakiin war layaableh ayaa maanta ka soo baxay kadib markii la ogaaday in lacag 3 milyan gini ah laga soo dayn saday qoyskii Bin Laden.
Sanadkii 2013 kii Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud ayaa saami boqolkiiba 50% ah ee kooxda Sheffield United waxa uu ka iibsaday ninka ay hadda maxkamada isla galeen ee Kevin McCabe.
Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud ayaa markaas kooxda Sheiffield United waxa uu ku maal galiyay 10 milyan gini.
Laakiin waxaa soo baxay in uu jiray masharuuc loo yaqaanay ” Project Delta” kaas oo lacag 3 milyan gini ah looga soo amaahday qoyskii hogaamiyihii Al Qacida ee Osama bin Laden waana lacag uu diiday in uu bixiyo Kevin McCabe.
Mulkiilihii Sheffield ee Kevin McCabe ayaa sheegay in ayna isaga waajib ku ahayn in uu bixiyo lacagta 3 milyan ginida ah ee laga soo daynsaday qoyskii Bin Laden taas oo sii xoojisay khilaafka uu kula jiro Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud.
Dhegaysigii arbacadii ee maxkada London, Kevin McCabe iyo Abudllah ayaa ku dooday haddii ay tahay in lacagtan la bixiyo wuxuuna Abdullah sheegay in ay waajib tahay in lacagtan la bixiyo maadaama oo ay dayn ku ahayd.
Laakiin dhegaysigii maanta oo khamiis ah, ayuu ninka kiiska Abullah gacanta ku haye ee Barrister Andreas Gledhill QC uu shaaca ka qaaday in ninka ay ishayaan ee Kevin McCabe uu markii horeba ogaa in lacagtu ay il dhaqaale oo kale ka timid.
Barrister Andreas Gledhill QC oo kiiska Abdulah ka canta ku haya ayaa isaga oo qiraya in Kevin McCabe uu lacagtan ogaa waxa uu yidhi: “Wuu ogaa in ay lacagtu ka timid il kale, oo ku magacaaban xubin ka tirsan qoyska Bin Laden”.
Kiiska is maxkamadaynta mulkiilayaasha wada leh kooxda Sheffeild United oo Premier League u soo dalacday ayaa qabsatay saxaafada England kadib markii la xaqiijiyay in lagu maal galiyay lacag laga soo amaahday qoyskii Osman Bin Laden.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa nooca uu noqon doono go’aanka maxkada sare ee London ay kiiskan ka gaadhi doonto waqtiyada soo socda.